Kazakhstan: Nanomboka ny blaoginy ny Praiminisitra · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan: Nanomboka ny blaoginy ny Praiminisitra
Voadika ny 14 Oktobra 2018 8:37 GMT
Tamin'ny 9 janoary teo, nampahafantarin'ny Biraon'ny Gazetim-panjakana fa nanokatra ny blaoginy manokana, na toa ofisialy ihany aza, i Karim Masimov, Praiminisitr'i Kazakhstan.
Tamin'ny volana Desambra lasa teo, nankao an-drenivohitr'i Rosia ny Praiminisitra, izay nanaovany tafatafa tao amin'ny onjam-peo Echo tao Moskoa. Andiana fanontaniana maro mahasadaikatra no napetraka taminy tao, anisan'izany ny antony nahatonga ny LiveJournal, ilay sehatra fitorahana blaogy malaza idnrindra, ho voasakana ao Kazakhstan. Tamin'izany indrindra no nanambaran'i Karim Massimov fa mitoraka blaogy koa ny tenany, mandalo matetika ao amin'ny Aterineto ary tsy manana olana amin'ny fidirana amin'ny LiveJournal izy. Nampanantena izy ny hamaha ity olana ity rehefa tafaverina ao Kazakhstan. Amin'izao fotoana izao, mbola voasakana foana ny LiveJournal, na dia efa nanomboka ny blaoginy manokana aza ny Praiminisitra… ao amin'ny tranonkalan'ny Kabinetran'ny Minisitra.
Manesoeso i dam-Kesher :
Raha izany ary no izy, dia izao, tokony hahazo kaonty ao amin'ilay vavahadin-tseraseran'ny governemanta daholo ireo rehetra manana kaonty voasakana ao amin'ny LiveJournal !
Mandritra izany fotoana izany; mitaraina amin'ny fitavozavozan'ny safidy ho famoahana ireo fanehoankevitra ireo mpitsidika voalohany ny «Premiere-blog» :
Efa ho antsasak'adiny aho izay no nahazo ny filazàna hoe «fandraketana fanehoankevitra» miantona eo amin'ny blaogin'i Massimov… hoy i nashingyou (amin'ny teny rosiana) mitaraina. Mihevitra i Adam fa mbola andalam-pandaminana ilay fanehoankevitra; ary mihanihany i alim-atenbeck amin'ny filazana fa tsy ilay fanehoa-kevitra irery ihany no nohamarinina fa ny mombamomba ilay namoaka azy ihany koa (amin'ny teny rosiana).
Mitodika amin'ireo mpitsidika ny blaoginy, manoratra i Massimov fa ny «fanolorana vaovao avo lenta, mahaliana ary ilain'ny mpamaky amin'ny endrika mahatehotia » no tanjona fototra amin'ity tetikasa ity. Nanambara ihany koa ny Praiminisitra fa «amin'ny ho avy, efa saika hahitana ireo vaovao rehetra ilain'ireo mpitsidika ny tranonkala avokoa ilay blaogy». Raha ny tena marina, tsy dia hita loatra ny antony hiarovana ireo tranonkalan'ny fanjakana, ny ministera sy ireo sampandraharaha…
Mandritra izany fotoana izany, gaga amin'ny ny zavatra roa (amin'ny teny kazakh) i Askhat :
«Fa nahoana no amin'ny teny rosiana irery ihany ilay blaogy?», ary «Rahoviana no hosokafana indray ny fidirana amin'ny LiveJournal?»
Fotoana vitsy taorian'ny fanolorana ny blaoginy, nibaiko ireo tomponandraikim-panjakana rehetra (indrindra ireo governora sy ben'ny tanàna) mba hanokatra ny blaoginy manokana ihany koa ny Praiminisitra. Namaly ny iray tamin'ireo fanehoankevitra tao amin'ny blaoginy ihany koa izy – ilay momba ny sampandraharaha any amin'ny Trano Fandroana ho an'ny daholobe ao Astana.
Toy izao no soratan‘i pycm momba izany :
Androany, efa mihoatra kely ny 160 ireo fanehoankevitra eo ambanin'ilay lahatsoratra firariantsoa, ao amin'ny blaogin'ny Praiminisitra. Saika hita ao avokoa ny zavatra rehetra anisan'izany ny fitarainana mafy momba ny tolotra any amin'ireo trano fandroana ao an-drenivohitra ! Ny hany zavatra tsy ao dia ny valinteny. Ohatry ny tsy hoe olona tena izy – izay manana fihetsehampo, fahalalana, fahaizana ary (ny tena lehibe indrindra) fahefana – no mipetraka eo. Hatreto aloha, toa mahatsapa foana fa robot no mitantana ity blaogy ity, na mpiasa efatra na dimy izay tsy mahafantatra ny vokatra tiany ho azo… Anatin'ny fotoana sarotra amin'ity krizy ity, nisokatra ny fahafahana miasa lehibe, ny ho ”sekreteram-blaogy”, namana an-tambajotran'ny Praiminisitra. Fa ny olana mbola tsy voavaha foana dia ny mitady namana iraisana, sy zavatra mahaliana ho an'ity orinasa ity…
Raha ny marina, tena irina mafy ary raisina an-tanandroa ny fametrahan'ny manam-pahefana fifanakalozan-kevitra amin'ny olona. Fa, raha ny zavatra hita, toa tsy ampy ny fahatakarana ny fampiasana ny blaogy izany amin'ny ankapobeny. Mampihomehy ny baiko hanokatra blaogy, satria tsy hiafara amin'ny zavatra hafa ankoatra ny «blaogy amam-polony maty am-piterahana». Raha fintinina, efa mipetraka any amin'ny tranonkalan'ny governora sy ny ben'ny tanàna rehetra ny «kahie fitarainana», izay afaka ametrahana amin'izy ireo fanontaniana amin'ny fomba mivantana.
Manamafy ilay baikon'ny Praiminisitra fa tsy nahomby ny fandaharanasan'ny Fanjakana amin'ny fampandrosoana ny fitantanana ampiasàna ny aterineto. Ary raha ny mikasika ilay tolotra any amin'ny trano fandroana ho an'ny daholobe, izay haingana dia lasa lohahevitra malaza, tena lavitra amin'ny zavatra tokony nosahanin'ny Praiminisitra izany. Kanefa na izany aza, taratry ny fiarahamonina izay iheveran'ny olona fa tokony tsy hitodika afa-tsy any amin'ny Andriana izy ireo raha hikatsaka ny rariny ao anatin'ny raharaha kely toa izany.
Tsy azoko antoka hoe mpampiasa mahafehy ny aterineto daholo ireo tomponandraikitra ara-panjakana eto amintsika ireo, fa tsy any no olona. Ny olana, dia ny nibaikon'ny Praiminisitra azy ireo hanokatra blaogy ao amin'ny tranonkalany. Mihevitra aho fa hahomby kokoa raha toa ka mivondrona anatina sehatra iray avokoa izy ireo, LiveJournal ohatra, mba hahafahantsika hampiditra azy ireo ho «namana» sy hamaky tsara ny lahatsoratra soratany toy ireo famoahan'ny «namana» hafa ihany koa hoy i nashingyou (amin'ny teny rosiana)
Marina fa vitsy ny mpampiasa aterineto mahay mampiasa ny RSS ao Kazakhstan ary aleon'izy ireo mitetitety fotsiny. Ny olana mbola miantona: mbola voasakana ao Kazakhstan foana ilay sehatra fitorahana blaogy LiveJournal. Na izany aza, efa nahazo soso-kevitra vitsivitsy ihany ingahy blaogera vaovao, izay voalohany manana sokajy ambony be toy izao.
Hahaliana kokoa ny hamaky mivantana ny kabarin'ny Praiminisitra ao amin'ny blaoginy, izay mety hiresahany mikasika ireo politikam-panjakana manokana sy ny kalitaon'ny fanatanterahana azy ireny, ny satan'ny sehatra ara-toekarena maro samihafa, ny politika iraisam-pirenena, na mety hanomezany valiny an'ireo tsikeran'ny haino aman-jery. Ao amin'ny lafiny ara-teknika, lafiny ratsy ny tsy fisian'ny safidy mba hanarahana ireo fanehoankevitra. Teboka iray lehibe ihany koa ny tsy fisian'ny fanavaozana matetika. Namoaka ny firariantsoany tamin'ny 31 desambra ny Praiminisitra. Avy eo, tsy nisy famoahana vaovao intsony, efa ho roa herinandro izay.
Sarivongana roa hafa ankalazan'i Kazakhstan ny mpitarika azy